Kwethulwe ijezi likaMathoho engekho | IOL Isolezwe
Kwethulwe ijezi likaMathoho engekho
Isolezwe / 29 June 2012, 12:12pm /
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 28, Kaizer Chiefs marketing manager Jessica Motaung unveil Eric Tower Mathoho jersey during the Kaizer Chiefs media open day at Lobola Kraal, Thaba YabaTshwane on June 28, 2912 in Johannesburg, South Africa Photo by Lefty Shivambu / Gallo Images
UKUVEZWA kwejezi elibhalwe igama lika-Eric “Tower” Mathoho ngesikhathi iKaizer Chiefs yethula abadlali bayo abasha eGoli izolo kuqinisekise izinkulumo zemenenja yalo mdlali, uTim Sukazi, obehlezi egcizelela ukuthi uzophelela eNaturena.
Iningi belimagange lifuna ukubona ukuthi uzobe ekhona yini lo mdlali wasemuva weBloemfontein Celtic ohleni lwabadlali abasha abethulwe yiChiefs izolo. Nokho imibuzo iphinde yaqubuka ngesikhathi kuvezwa ijezi elingunombolo 3 libhalwe igama lakhe uMathoho. Lolu nkonko lo mdlali belungabonwa nangokhalo kodwa seluke lwabonakala ejimini yeChiefs kulona leli sonto. Ngesikhathi izintatheli ziphonsa imibuzo yokuthi ngabe kwenzekani ngoMathoho kuhlalukile ukuthi lo mdlali akakasayini njengoba sekuzwakale kaningi ukuthi neMamelodi Sundowns ayizibekile phansi imnunusela ngemali yize esemagcekeni aseNaturena.
UJessica Motaung oyiBrand Manager yeChiefs uvumile ukuthi uMathoho akakasayini kodwa waqinisekisa abalandeli beChiefs ukuthi ikhaya elilandelayo lalo mdlali iyona iNaturena.
“Ngingasho ngithi njengabaphathi beqembu sisebenza kanzima ukuthi sithole lo mdlali kodwa sesivumelene naye. Ukubeke kwacaca ukuthi uyalithanda iqembu, kufanele silungise izinto ezincane nje bese konke kuyobe sekulungile,” kusho uJessica.
Yize ekhulume kanje uJessica kodwa kuyacaca ukuthi kusengenzeka noma yini ngalo mdlali ngoba akukho phepha asalisayinile neChiefs. Okucishe kuhlaluke lapha ukuthi iCeltic ididekile ngemali ebekwa yiSundowns etafuleni njengoba kuvela ukuthi inkulu kunekhishwa yiChiefs.
Njengoba bekulindelekile kumenyezelwe uDoctor Khumalo, Ace Khuse no-Arthur Zwane njengabaqeqeshi abazoba ngamaphini kaStuart Baxter. URainer Dinkelacker uzoba ngumqeqeshi wonozinti.
Akuzange kube khona okwethusayo ngesikhathi bememezela abadlali abebelindelwa okungoMorgan Gould (Supersport United), Siyabonga Nkosi (Golden Arrows), Siyabonga Gaxa (Lierse, Belgium), Kgotso Moleko (Celtic), Sakhile Hlongwa (Thekwini Coastal) noBrilliant Khuzwayo obengekho ngoba iThanda Royal Zulu beyidlala ngoLwesithathu.
“Ngesizini edlule siye sabheka lapho ebesibona khona izikhala sase siqhamuka nokuthi kufanele kusayinwe laba badlali. Sicabanga ukuthi bazolishintsha iqembu behlangene nabaqeqeshi nabalandeli esibheke ukuthi bagcwalise inkundla. Siphinde sakhulula abadlali okubalwa kubo uTinashe Nengomashe, Dominic Isaacs, Thomas Sweswe nabanye. Sibafisela inhlanhla emaqenjini abo amasha,” kusho uJessica Motaung.